Igumbi lokulala eli-2 kwizindlu zanamhlanje embindini - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-2 kwizindlu zanamhlanje embindini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguСергей
UСергей ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Le yindlu entle yanamhlanje esembindini wesixeko, ecaleni kweClock yeentyatyambo kunye nomfanekiso oqingqiweyo weCogiq Horn, eziyimiqondiso yesixeko, kwaye ikufutshane kakhulu nevenkile ezinkulu ezimbini zeATB kunye neSportLife gym, kunye nosapho. iziko lokuzonwabisa (bowling, imidlalo, cinema, njl.). Indawo zokutyela ezigqwesileyo kukuhamba imizuzu eli-10.
Iindwendwe ezithandekayo, wamkelekile eKrivoy Rog! Ndiyavuya ukukunika indawo entle enegumbi elinye lokulala, ebekwe kakuhle kumbindi wesixeko. Izinto ezininzi ezikhangayo ngaphakathi komgama wokuhamba, isitalato esisembindini saseKiev kunye nazo zonke iintlobo zokuzonwabisa - iKhreshchatyk kunye nabanye. Indawo yokuhlala ibekwe kufutshane nesikhululo se-metro "Teatralnaya". Kwakhona kule ndawo unokufumana iikhefi ezigqwesileyo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Indlu inoyilo lwangoku, ifanitshala ekhululekile. Iibhedi yibhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kunye nesofa esongwayo kwigumbi lokuhlala, ngoko ke ukuya kuthi ga kwi-4 abantu banokuhlaliswa kunye nefulethi. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ngeketile, isitovu, izixhobo eziyimfuneko. Kwakhona, igumbi linayo yonke into yobomi obutofotofo, iTV, i-intanethi ye-wi-fi, umatshini wokuhlamba kunye nokunye. Iilinen ezintsha kunye neetawuli zinikezelwa.
Siza kuzama ukwenza ukuhlala kwakho eKrivoy Rog kube lula kangangoko kunokwenzeka!
Indlu ibekwe kwintendelezo ezolileyo, epholileyo, kodwa kwangaxeshanye kumbindi wesixeko, ikhilomitha nje enye ukusuka kumbindi (Gorky Square). Kumgama ohambahambayo liziko lokuthenga kunye nelolonwabo iManyano, imarike esembindini yeSotsgorod.
Kufuphi nepaki enewotshi enkulu yeentyatyambo eYurophu, iziko lolonwabo iManyano enendawo yokutyibiliza, icinema, ibowling, njl.
Я живу в Украине и очень люблю путешествия
Andihlali eflethini, kodwa iindwendwe zinokundibiza ngawo nawuphi na umcimbi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kryvyi Rih